“သူမဘဝအတွက် အမြဲအမှတ်ရနေမယ့် အမှတ်တရဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုကို တင်လာခဲ့တဲ့ မိုးဟေကို” - Cele Connections
မဟာဆန်စွာ လှပတဲ့နာမည်ကြီး မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ မိုးဟေကိုကိုတော့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်.။ မိုးဟေကိုက မော်ဒယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အများချစ်ခင်မှုတွေကို ရရှိကာ အောင်မြင်တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်.။ မိုးဟေကိုက လက်ရှိမှာ ကိုယ်တိုင် သရုပ်ဆောင်မှုတွေကို သိပ်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘဲ “မိုး” ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကို ဦးစီးလုပ်ဆောင်နေတာပါ..။
သူမရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်လေးတွေကိုသာ တင်လေ့ရှိသူ မိုးဟေကိုက ဒီနေ့ ဧပြီလ (၂၆)ရက်နေ့မှာတော့ သူမဘဝအမှတ်တရရှိနေတော့မယ့် အမှတ်တရဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုကို “အချိန်တွေ ဘယ်လောက်ပဲကြာသွားပေးမယ့် ကျွန်မချစ်သော.. ဖန်တီးမှုလေးက မိုး ဘဝမှာဘယ်တော့မှမေ့မရတဲ့ အမှတ်တရတွေထဲက အမှတ်တရ တစ်ခု….။ ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုကို အကောင်းဆုံးစိတ်ရှည်သည်းခံပြီး ဖန်တီး ပေးခဲ့တဲ့ Life Photography မှ ကိုလင်းထွန်း ကိုကင်း ကိုဆုရာ နဲ့ ကိုသုံးပေါင် ပါဝင်ပေးခဲ့တဲ့ တစ်ယောက်ချင်းဆီကိုလည်း အမြဲအမှတ်တရ ကျေးဇူးတင်လျက်…. ။ ကျွန်မချစ်သော…. ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်..။
မြန်မာပြည်အနှံ့ လှပလွန်းတဲ့ ရှုခင်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ “ကျွန်မချစ်သော” MTV လေးကို သူမဘဝအတွက် အမှတ်တရလေးအဖြစ် ကျန်နေခဲ့မယ့် အမှတ်တရဗီဒီယိုလေအနေနဲ့ သူမချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်ပါ ချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် ပရိသတ်ကြီး.။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း မိုးဟေကိုရဲ့ အမှတ်တရတွေ ပါဝင်နေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
“သူမဘဝအတှကျ အမွဲအမှတျရနမေယျ့ အမှတျတရဗီဒီယိုဖိုငျလေးတဈခုကို တငျလာခဲ့တဲ့ မိုးဟကေို”
မဟာဆနျစှာ လှပတဲ့နာမညျကွီး မငျးသမီးတဈလကျဖွဈတဲ့ မိုးဟကေိုကိုတော့ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော.။ မိုးဟကေိုက မျောဒယျတဈယောကျအနနေဲ့ အနုပညာအလုပျတှကေို စတငျလုပျကိုငျခဲ့ပွီး အမြားခဈြခငျမှုတှကေို ရရှိကာ အောငျမွငျတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျပဲဖွဈပါတယျ.။ မိုးဟကေိုက လကျရှိမှာ ကိုယျတိုငျ သရုပျဆောငျမှုတှကေို သိပျမလုပျဖွဈတော့ဘဲ “မိုး” ရုပျရှငျထုတျလုပျရေးကို ဦးစီးလုပျဆောငျနတောပါ..။
သူမရဲ့ အနုပညာလှုပျရှားမှုပုံရိပျလေးတှကေိုသာ တငျလရှေိ့သူ မိုးဟကေိုက ဒီနေ့ ဧပွီလ (၂၆)ရကျနမှေ့ာတော့ သူမဘဝအမှတျတရရှိနတေော့မယျ့ အမှတျတရဗီဒီယိုဖိုငျလေးတဈခုကို “အခြိနျတှေ ဘယျလောကျပဲကွာသှားပေးမယျ့ ကြှနျမခဈြသော.. ဖနျတီးမှုလေးက မိုး ဘဝမှာဘယျတော့မှမမေ့ရတဲ့ အမှတျတရတှထေဲက အမှတျတရ တဈခု….။ ဖွဈခငျြတဲ့ဆန်ဒတဈခုကို အကောငျးဆုံးစိတျရှညျသညျးခံပွီး ဖနျတီး ပေးခဲ့တဲ့ Life Photography မှ ကိုလငျးထှနျး ကိုကငျး ကိုဆုရာ နဲ့ ကိုသုံးပေါငျ ပါဝငျပေးခဲ့တဲ့ တဈယောကျခငျြးဆီကိုလညျး အမွဲအမှတျတရ ကြေးဇူးတငျလကျြ…. ။ ကြှနျမခဈြသော…. ပရိတျသတျတှေ အတှကျ ပွနျလညျ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ…” ဆိုပွီး သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ..။
မွနျမာပွညျအနှံ့ လှပလှနျးတဲ့ ရှုခငျတှနေဲ့ ရိုကျကူးထားတဲ့ “ကြှနျမခဈြသော” MTV လေးကို သူမဘဝအတှကျ အမှတျတရလေးအဖွဈ ကနျြနခေဲ့မယျ့ အမှတျတရဗီဒီယိုလအေနနေဲ့ သူမခဈြတဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျပါ ခပြွလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော ပရိသတျကွီး.။ Cele Connections ပရိသတျကွီးအတှကျလညျး မိုးဟကေိုရဲ့ အမှတျတရတှေ ပါဝငျနတေဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော..။
သမီးလေး ဂျူဂျူးနဲ့ အတိုင်အဖောက်ညီညီ သီချင်းလေးဆိုရင်း ဖခင်တစ်ယောက်ပီပီ ကြည်နူးနေရတဲ့ မိုးမိုးရဲ့ ဗီဒီယို
” သူမကြိုက်တဲ့ အရာလေးကို မြင့်မြတ်တဲ့အရာလေးနဲ့ တင်စားကာ အရွှန်းဖောက်လိုက်တဲ့ စိုးပြည့်သဇင် “
“သူမရဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ ကိုယ်တိုင်ချုပ်ထားတဲ့ Mask တွေကို ချစ်တဲ့သူတွေဆီ လိုက်ဝေခဲ့တဲ့ ချောစုခင်”